Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, December 27, 2009 Sunday, December 27, 2009 Labels: ရသစာစုများ
ကျွန်တော် ငယ်စဉ်ဘ၀လေးကတည်းက မေမေဟာ ကျွန်တော့်ကို ညာပြောခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့မိသားစုက ဆင်းရဲပါတယ်.. တစ်ခါတစ်လေဆို စားစရာတောင် လုံလုံလောက်လောက် မရှိပါဘူး… ဒါပေမဲ့ စားစရာလေးများ ရလာပြီဆိုရင် မေမေက သူ့ဝေစုထဲကနေ ကျွန်တော့်ကို ခွဲပေးပါတယ်.. သူ့ပန်ကန် လေးထဲကနေ ကျွန်တော့ ပန်းကန်ထဲကို ပြောင်းထည့်ပေးရင်းနဲ့ ”သား စားလိုက်နော်.. မေမေ သိပ်မဆာလို့ပါ ” …. ဒါကကျွန်တော့မေမေရဲ့ ပထမဆုံး လိမ်ညာခြင်းပါ…
ကျွန်တော် နည်းနည်း အရွယ်ရလာတော့ ရတဲ့ အချိန်လေးတွေမှာ မေမေဟာ အိမ်နားက မြစ်ထဲကို သွားပြီးငါးမျှားလေ့ရှိပါတယ်… မေမေက ငါးရလာရင် ကျွန်တော် အဟာရဖြစ်အောင် ကျွေးမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ငါးမျှားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်… တစ်နေ့ မေမေက ငါး၂ကောင် ဖမ်းမိလာတယ်..ရလာတဲ့ ငါး၂ကောင်ကို ဆွပ်ပြုတ် လုပ်ပါတယ်.. ကျွန်တော် အဲဒီ ငါးဆွပ်ပြုတ်ကို မိန်ရည်ရှက်ရည်သောက်ရင်း အသားတွေကို စားနေတုန်း မေမေက ဘေးကနေ ထိုင်ပြီး ကျွန်တော် စားလို့ ကျန်တဲ့ ပန်းကန်ထဲက အရိုးမှာ ကပ်နေတဲ့ အသားစလေးတွေကို စားနေပါတယ်.. ကျွန်တော်မေမေ့ကို ကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားမိတယ်.. ဒါကြောင့် ကျန်နေသေးတဲ့ ငါး တစ်ကောင်ကို မေမေ့ကို ပေးလိုက်တော့ မေမေက ချက်ခြင်းဘဲ ငြင်းတယ်.. “သားဘဲ စားပါကွယ် မေမေက ငါးမှမကြိုက်တာ “.. ဒါက မေမေ့ရဲ့ ၂ကြိမ်မြောက် လိမ်ညာခြင်း
တစ်ဖြေးဖြေးနဲ ကျွန်တော့်ကျောင်းစရိတ်က ကြီးလာတယ်.. မေမေက အပိုဝင်ငွေ ရအောင်ဆိုပြီး မီးခြစ်စက်ရုံကနေ မီးခြစ်ဘူးခွံအဟောင်းတွေ တောင်းယူလာတယ်.. အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မီးခြစ်ဆံ အသစ်လေးတွေ ပြန်ဖြည့်ပြီး ဈေးထဲမှာပြန်ရောင်းပါတယ်.. အဲဒီက ရတဲ့ ငွေကလေးနဲ့ အိမ်အတွက် လိုအပ်တာလေးတွေ ဖြည့်ဆည်းရတယ်.. ကျွန်တော့် ကျောင်းစရိတ် ထဲ ထည့်ရပါတယ်…. ချမ်းအေးလွန်းတဲ့ ဆောင်းည တစ်ညမှာ ကျွန်တော် တစ်ရေးနိုးလာတော့ မေမေဟာ ဖယောင်းတိုင် မီးကလေးနဲ့ မီးခြစ်ဆံတွေ ဖြည့်နေတုန်းဘဲ ရှိသေးတယ်.. ကျွန်တော်က “မေမေ အိပ်တော့လေ.. ညနက်နေပြီ.. မနက်ကျမှ ဆက်လုပ်လို့ ရသားနဲ့..” မေမေက ပြုံးပြီး ပြန်ပြောပါတယ်.. “သားလေးသာ သွားအိပ်ပါကွယ် .. မေမေက မအိပ်ချင်သေးပါဘူး..” ဒါက မေမေရဲ့ ၃ကြိမ်မြောက် လိမ်ညာခြင်းပါ..
ကျွန်တော် အတန်းတင်စာမေးပွဲဖြေမဲ့နေ့…. မေမေကလဲ ကျွန်တော်နဲ့အတူ ကျောင်းကို လိုက်လာတယ်.. ကျောင်းအပြင်ဘက် နေပူကျဲကျဲကြီးထဲမှာ ကျွန်တော် စာမေးပွဲဖြေတာကို မေမေက ထိုင်စောင့်နေတယ်.. စာမေးပွဲပြီး ခေါင်းလောင်းထိုးတော့ မေမေ့ဆီ ကျွန်တော်ပြေးသွားတယ်..မေမေက ကျွန်တော့်ကို ဆီးဖက်လိုက်ပြီး ဓာတ်ဗူးထဲမှာ ထည့်လာတဲ့ လ္ဘက်ရည်ကို ခွက်ထဲ ငှဲ့ပြီး ကျွန်တော်သောက်ဖို့ ပေးတယ်.. မေမေရဲ့ လ္ဘက်ရည်က မေမေရဲ့ မေတ္တာလောက် မချိုဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် ပြောရဲပါတယ်ဗျာ.. နေပူထဲရပ်နေလို့ ချွေးတွေထွက်နေတဲ့ မေမေ့ကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော်ရဲ့ လ္ဘက်ရည်ခွက်ကို မေမေ့ကို ကမ်းပေးလိုက်ပြီး အတူတူ သောက်ဖို့ ပြောတော့ မေမေက “သားဘဲ သောက်စမ်းပါသားရယ်.. မေမေက ရေမငတ်ပါဘူး” ဒါက မေမေရဲ့ ၄ကြိမ်မြောက်လိမ်ညာမှု
ကျွန်တော်တို့ အဖေဆုံးသွားတော့ မေမေတစ်ယောက်တည်း ဖခင်နေရာကရော အမေနေရာကနေပါ အိမ်တာဝန်ထမ်းရပါတော့တယ်.. . မေမေ့အရင် အလုပ်ဟောင်းကိုဘဲ ဆက်လုပ်တယ်… မေမေတစ်ယောက်တည်း ရုန်းကန်နေရတော့ ကျွန်တော်တို့ စားဝတ်နေရေးက ပိုပြီး ကျပ်တည်းလာတယ်.. ငတ်လုနီးပါး ဖြစ်လာတယ်.. အခြေအနေက ပိုပိုပြီး ဆိုးဆိုးလာတယ်.. အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ အိမ်နားမှာနေတဲ့ သဘောကောင်းတဲ့ ဦးလေးကြီးတစ်ယောက်က မကြာခန ရောက်ရောက်လာပြီး ကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့ ပြဿနာ ကြီးကြီးသေးသေး မှန်သမျှ အကုန် သူဘဲ ဖြေရှင်းပေးပါတယ်.. ဒါတွေကို မြင်တဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေက မေမေ့ကို အိမ်ထောင် ထပ်ပြုဖို့ အကြံပေးကြတယ်.. တိုက်တွန်းကြတယ်.. ဒါပေမဲ့ မေမေက တွင်တွင်ငြင်းတယ်.. “ကျွန်မ အိမ်ထောင်ရေးကို စိတ်မ၀င်စားတော့ပါဘူး.. အချစ်ဆိုတာလဲ ကျွန်မအတွက် မလိုအပ်တော့ပါဘူး” ဒါက မေမေရဲ့ ၅ကြိမ်မြောက် လိမ်ညာခြင်းပါ..
ကျွန်တော် ကျောင်းတွေပြီးလို့ တစ်မြို့တစ်ရွာမှာ အလုပ်ရတော့ မေမေ့ကို အနားပေးဖို့အချိန်ရောက်ပြီ…. ကျွန်တော် ပြန်လုပ်ကျွေးဖို့ အချိန်ဘဲဆိုပြီး မေမေ့ကို အလုပ်မလုပ်တော့ဖို့ပြောပေမဲ့ မေမေက မနက်တိုင်း ဈေးထဲမှာ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်လေးတွေ ရောင်းတုန်းဘဲ… ကျွန်တော်က အမေသုံးဖို့ဆိုပြီး ငွေတွေ ပို့ပေးရင် ဘယ်တော့မဆို မေမေက ကျွန်တော့်ကို ပြန်ပို့ပေးတယ်.. “မေမေ့မှာ ငွေတွေ သုံးဖို့ ရှိပါသေးတယ် သားရယ် မေမေ ငွေမလိုပါဘူး” မေမေ့ရဲ့ ၆ကြိမ်မြောက် လိမ်ညာခြင်းပါ..
ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အမေရိကား ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ အထောက်အပံ့နဲ့ မာစတာဒီဂရီ ရဖို့အချိန်ပိုင်း ကျောင်းတက်ပါတယ်.. မာစတာဘွဲ့ ရပြီးသွားတော့ ကျွန်တော် လစာတော်တော်များများ တိုးလာတော့ မေမေ့ကို ခေါ်ဖို့ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်.. လူနေမှု အဆင့်အတန်း မြှင့်မြှင့်နဲ့ မေမေ့ကို ကျွန်တော် ထားချင် ပါသေးတယ်.. ဒါပေမဲ့ မေမေက ကျွန်တော် အလုပ်ရှုပ်မှာ ကရိကထ များမှာကို မလိုလားတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ခေါ်တာကို ငြင်းပါတယ်.. “မေမေ မလာတော့ ပါဘူးသားရယ် . မေမေက သား အခု ရောက်နေတဲ့ အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်း မျိုးမှာ နေသားမကျပါဘူး..မေမေပျော်မှာ မဟုတ်ပါဘူးကွယ်..” မေမေရဲ့ ၇ကြိမ်မြောက် လိမ်ညာခြင်းပါ..
မေမေ အသက်အရွယ် တော်တော်ရလာတော့ ကင်ဆာကြောင့် ဆေးရုံမှာ ရောက်နေပြီ… ကျွန်တော် ကြားကြားချင်းဘဲ ပင်လယ်ကို ဖြတ်ပြီး မေမေ့ကို တွေ့ဖို့အိမ်ကို ပြန်လာခဲ့တယ်… မေမေက ရောဂါရဲ့ နှိပ်စက်မှုကြောင့် ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံထားရတယ်.. အိပ်ရာပေါ်ကနေ မထနိုင် တော့ဘူး… ကျွန်တော့်ကိုတွေ့တော့ မေမေက ပြုံးပြဖို့ ကြိုးစားတယ်… ပိန်လှီပြီး အားနည်းဖျော့တော့ နေတဲ့ မေမေရဲ့ ရုပ်က ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က မေမေ့ရဲ့ ရုပ်နဲ့ ဘယ်လိုမှကို မတူတော့ဘူး … မေမေ့ကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော် စိတ်ထိခိုက်မိတယ်.. မျက်ရည်တွေ အလိုလို ကျလာတယ်… မေမေက လေသံယဲ့ယဲ့လေးနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ပြောတယ်.. “မငိုပါနဲ့ သားရယ် မေမေ မနာပါဘူး.. မေမေ နေကောင်းပါတယ်”.. ဒါကတော့ မေမေရဲ့ ၈ကြိမ်မြောက် လိမ်ညာခြင်းပါ…
၈ကြိမ်မြောက် လိမ်ညာပြီးတဲ့နောက် ကျွန်တော့်မေမေ ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်.. မေမေရဲ့ လိမ်ညာခြင်းကို ဘယ်လောက်ဘဲ ကျွန်တော် ပြန်လိုချင် ပြန်ကြားချင်ပေမဲ့ ပြန်မရနိုင်တော့ပါဘူးဗျာ…
ဒီဇာတ်လမ်းလေး ဖတ်ပြီးတော့ သားသမီးတွေအပေါ် ထားတဲ့ အမေတွေရဲ့ စုန်ရေမေတ္တာလေးကို နက်နက်နဲနဲ သဘော ပေါက်မိပါတယ်…… ကျွန်မတို့ရဲ့ အမေတွေ ကလည်း ကျွန်မတို့ အပေါ်မှာ ခုလို မုသား ဖြူဖြူလေးတွေနဲ့ လိမ်ညာခဲ့ကြ ဖူးပါတယ်နော်… သားသမီးတွေကို ချစ်ခြင်း အားဖြင့် လိမ်ညာတဲ့ အတွက် အမေတွေရဲ့ မုသားက အင်မတန်မှ လေးစားထိုက်တဲ့ ၊ ကိုယ်ကျိုးမပါတဲ့ အဖြူရောင် မုသားတွေပါ… ကျွန်မတို့ ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံးမှာ အမေတွေရဲ့ မုသားတွေနဲ့ အခါခါ ကြုံခဲ့ကြ ဖူးပါလိမ့်မယ်…. သားသမီးတွေဘက်ကရော.. အမေတွေရဲ့ အဖြူရောင် မုသားလေးတွေအတွက် ဘာတွေများ ပြန်ပေးဆပ်နိုင်ကြပြီလဲ.. ပေးဆပ်ဖို့ ကြိုးစားကြပြီလဲ.. ကျွန်မတို့ အမေတွေရဲ့ မုသားလေးတွေ ဒီလောက ကမ္ဘာကြီးကနေ မပျောက်ကွယ်ခင်မှာ အချိန်မှီလေး ပြန်လည် ပေးဆပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစား ကြပါစို့လားရှင်…..
http://www.funzug.com/sweet-8-lies-of-a-mother-story.html မှ ဘာသာပြန်ကာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အမေ အားလုံးကို ဂုဏ်ပြု လိုက်ပါတယ်ရှင်…
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, December 23, 2009 Wednesday, December 23, 2009 Labels: ရသစာစုများ
မောင်မောင်ဟာ တက္ကသိုလ် ကနေ မကြာခင် ဘွဲ့ယူရတော့မဲ့ လူငယ် တစ်ယောက်ပါ… သူ့အဖေဟာ ချမ်းသာတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ကြီး တစ်ဦးလဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ဘွဲ့ယူရတော့မဲ့ သူ့အနေနဲ့ ခုချိန်မှာ သူ အလိုချင်ဆုံး တစ်ခုက မော်တော်ကား အရောင်းပြခန်းတစ်ခုမှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ သိပ်ကိုလှပတဲ့ ပြိုင်ကားလေး တစ်စီးပါ… ဒီကားလေးဟာလည်း မောင်မောင် သိပ်ကို လိုချင် မက်မော နေတဲ့ ကား ဆိုတာ သူ့အဖေကို ပြောပြပြီးသား ဖြစ်သလို ဒီကားလေးကို သူ့ အဖေ ၀ယ်ပေး နိုင်တယ်ဆိုတာ လည်း မောင်မောင်က သိပါတယ်…
မောင်မောင် ဘွဲ့ယူဖို့ရက် နီးကပ်လာလေ သူ့အဖေ ကားဝယ်ပေးတော့မှာဘဲ ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်က ကြီးလေလေ ဖြစ်လာပါတယ်… နောက်ဆုံးမှာတော့ မောင်မောင် မျှော်လင့် တဲ့ရက် ရောက်လာပါပြီ.. ဘွဲ့ယူမဲ့နေ့ မနက်စောစော သူ့အဖေက မောင်မောင်ကို စာကြည့်ခန်းထဲ ခေါ်သွားပါတယ်….
မောင်မောင့််လို တော်တဲ့လိမ္မာတဲ့သားမျိုး ရတဲ့အတွက် သူဘယ်လောက် ဂုဏ်ယူကြောင်းနဲ့ မောင်မောင်ကို ဘယ်လောက် ချစ်ကြောင်းတွေ သူ့အဖေက ပြောပါတယ်… ပြောလို့ ပြီးတော့ လှလှပပ ထုပ်ပိုးထားတဲ့ လက်ဆောင် ဗူးလေးတစ်ခုကို မောင်မောင့်လက်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်… မောင်မောင် စိတ်ပျက်လက်ပျက် ခံစားလိုက်ရပါတယ်…… ဒီလက်ဆောင်ထုပ်လေးဟာ သူစောင့်စားနေတဲ့ သိပ်ကို လိုချင်နေတဲ့၊ မျှော်လင့်နေတဲ့ မော်တော်ကားတစ်စီး မဖြစ်နိုင် တော့ပါဘူး…. စိတ်မပါလက်မပါနဲ့ ဗူးလေးကို သူ့အဖေရှေ့မှာ ဖွင့်လိုက်ပါတယ်
ဗူးလေးထဲကနေ သားရေအဖုံး ကျကျနန ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ ချစ်စရာ ကျမ်းစာအုပ်လေးတစ်အုပ် ထွက်လာပါတယ်.. ကျမ်းစာအုပ်ကိုလဲ မြင်လိုက်ရော မောင်မောင့် ဒေါသက အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်သွားပါတော့တယ်…
“ အဖေ့မှာရှိတဲ့ ပိုက်ဆံတွေနဲ့၊ အဖေချမ်းသာသမျှ ငွေတွေနဲ့ သားဘွဲ့ယူမဲ့နေ့ကို ဂုဏ်ပြုလိုက်တာက ဒီ ကျမ်းစာအုပ်တဲ့လား အဖေ ”
သူ ဒေါသတကြီး အဖေ့ကို အော်ပြောလိုက်ပြီး ကျမ်းစာအုပ်ကို ပစ်ချ လိုက်တယ်… ပြီးတော့ အိမ်ထဲကနေ လေရဲ့ အဟုန်လို ပြေးထွက် ခဲ့ပါတော့တယ်…တစ်ချက်ကလေးမှ အဖေ့ကို သူ လှည့်မကြည့်ခဲ့တော့ပါဘူး….
နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာတဲ့ အခါမှာ မောင်မောင်ဟာ စီးပွားရေးလောကမှာ အလွန် အောင်မြင် ထင်ရှားတဲ့ သူ တစ်ယောက် ဖြစ်နေပါပြီ.. အများက အားကျ မက်မော လောက်တဲ့ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစု လေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါပြီ…. သူနဲ့ သူ့အဖေ တို့ဟာ သူဘွဲ့ယူမဲ့ နေ့ အိမ်က ထွက်လာကတည်းက တစ်ခါမှ ပြန်မတွေ့ ဖြစ်တော့ပါဘူး…. သူ့အဖေဟာ ခုချိန်မှာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်နေပါပြီ… သူ့အနေနဲ့ အဖေ့ကို သွားတွေ့ သင့်တယ် ဆိုတာ သူသဘောပေါက် နားလည်လာပေမဲ့ အလုပ်များလွန်းတာကြောင့် မသွားနိုင် ခဲ့ပါဘူး..
အဖေ့ကို သွားတွေ့ဖို့ စိတ်ထဲမှာ ရှိနေပေမဲ့ သူအစီအစဉ် မလုပ်နိုင်ခင်မှာဘဲ ကြေးနန်းတစ်စောင် ရောက်လာ ပါတယ်… သူ့အဖေ ဆုံးသွားပါပြီ.. သူ့အဖေ သေတမ်းစာ ထဲမှာ ပိုင်ဆိုင်သမျှ ပစ္စည်းအားလုံး မောင်မောင့် နံမည်နဲ့ လွှဲပေးခဲ့တဲ့အတွက် သူမဖြစ်မနေ အဖေ့အိမ်ကို သွားရပါတော့မယ်… ပစ္စည်းတွေကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရပါတော့မယ်…
သူ့အဖေ့အိမ်ကို ပြန်ရောက်တော့ အဖေကို သတိတရနဲ့ ၀မ်းနည်းစိတ်တွေ ၊ နောင်တတွေနဲ့ ရင်ထဲမှာ ဆို့နင့်လာပါတယ်…. သူ့အဖေရဲ့ အရေးကြီး စာရွက်စာတမ်း တွေကို သူလိုက်ကြည့်ရင်း နဲ့ စာကြည့်ခန်းထဲ ရောက်တဲ့အခါ သူဘွဲ့ယူမဲ့နေ့က အဖေ သူ့ကိုပေးခဲ့တဲ့ ကျမ်းစာအုပ်လေးကို တွေ့လိုက်ပါတယ်…. ဒီလောက် နှစ်တွေ ကြာခဲ့တာတောင် သူထားရစ်ခဲ့စဉ်က အတိုင်း အသစ်စက်စက်ဘဲ ရှိနေပါသေးတယ်…
စာအုပ်လေးကို ကြည့်ပြီး မောင်မောင့်ပါးပြင်ပေါ် မျက်ရည်တွေ စီးကျလာပါတယ်… နောင်တတွေ ၀မ်းနည်း ပူဆွေးမှုတွေနဲ့ စာရွက်လေးတွေကို တစ်ရွက်ချင်း လှန်ကြည့်နေမိပါတယ်…. အဲဒီလို လှန်ကြည့်နေတုန်း ကျမ်းစာအုပ်လေးရဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ညှပ်ထားတဲ့ စာအိပ်လေးထဲကနေ ကားသော့လေးတစ်ချောင်း ထွက်ကျ လာပါတယ်…
ကားသော့လေး နဲ့အတူ ဘောင်ချာဖြတ်ပိုင်းလေးတစ်ခု ကို သူ တွေ့လိုက်ရတယ်… အဲဒီ ဘောင်ချာမှာ မော်တော်ကား အရောင်းပြခန်းရဲ့ နံမည်နဲ့ လိပ်စာကိုပါ တွေ့ရတယ်.. သူမှတ်မိပါတယ်.. အဲဒီပြခန်းဟာ သူသိပ်လိုချင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပြိုင်ကားကို ရောင်းခဲ့တဲ့ အရောင်းပြခန်းပါ…. ပြီးတော့ ဘောင်ချာပေါ်မှာ သူဘွဲ့ယူတဲ့ နေ့စွဲလေးနဲ့ အတူ ငွေအကျေ ပေးချေပြီး ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးပါ…..
အဖေမရှိတော့တဲ့ ခုလိုအချိန်မှာမှ အဖေ့စေတနာ မေတ္တာကို သူနားလည်သွားခဲ့ပြီ.. မြင်တွေ့လာရပါပြီ.. ဒါပေမဲ့ အဖေသိအောင် သူဘယ်လို ပြောပြရတော့မလဲ.. ဘွဲ့ယူတဲ့မနက်က ဒီကျမ်းစာအုပ်လေးကို ဘာလို့များ သေချာ မကြည့်ခဲ့ရတာလဲဆိုတဲ့ ယူကျုံးမရ နောင်တတွေနဲ့ ငိုကြွေး နေမိပါတယ်… သူဘွဲ့ယူတဲ့နေ့ကသာ ဒီကားသော့လေး သူတွေ့ခဲ့မိရင် အဖေ့စေတနာ မေတ္တာကို အထင်လွဲခဲ့မိမှာမဟုတ်ဘူး… သူလည်း ကျေနပ် ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ အဖေနဲ့အတူ တစ်ချိန်လုံး ရှိနေခဲ့မှာ သေချာပါရဲ့.. သူမရှိတဲ့ အချိန်တွေမှာ အဖေ တစ်ယောက်တည်း ဘယ်လောက်တောင် အထီးကျန် ၀မ်းနည်းနေခဲ့မှာပါလိမ့်… ခုတော့ အရာရာ နောက်ကျသွားပါပြီ… သူ့အမှားတွေအတွက် အဖေ့ကို တောင်းပန်ခွင့်၊ အဖေရဲ့ခွင့်လွှတ် စကားသံကို နားထောင်ခွင့် သူမရနိုင်တော့ပါဘူး……..
ကျွန်မတို့ဟာ ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာ မိဘတွေရဲ့ မေတ္တာကို သေချာနားမလည် ခဲ့ကြပါဘူး… မိဘတွေနဲ့ ဝေးရာကို ရောက်နေတဲ့အခါ… ဒါမှမဟုတ် မိဘတွေ ဆုံးပါးသွားတဲ့ အခါမှသာ မိဘရဲ့စေတနာ မေတ္တာတွေကို သဘောပေါက် နားလည်တတ်ကြပါတယ်… အဲဒီအချိန်ဟာ နောက်ကျနေတတ်ပါတယ်… ဒီတော့ အချိန် မနှောင်းခင်လေးမှာ မိဘရဲ့ မေတ္တာ စေတနာတွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိအောင် ၊ အထင်မမှားအောင် ကြိုးစားသင့်လှပါတယ်…. ပြီးတော့လဲ ကျွန်မတို့ တွေရဲ့ဘ၀မှာ သေချာဂရု မစိုက်မိတဲ့အတွက် အခွင့်အရေး ကောင်းတွေကို လက်လွတ် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာ ဘယ်လောက်များပြီလဲ ဆိုတာ မသိနိုင်ပါ ဘူးနော်.. တစ်ခါတစ်လေမှာ အခွင့်အရေးဆိုတာ အပေါ်ယုံကြည့်ယုံနဲ့ မမြင်ရတတ်ပါဘူး…. ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ကိုယ်မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ပုံစံနဲ့ ထုပ်ပိုးထားတော့ ဂရုမစိုက်မိဘဲ ဆုံးရှုံးသွား ရတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်… ဒါလေးကတော့ ဒီပုံပြင်လေးက ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာလေးပါရှင်…..
ခရီးထွက်နေတုန်း ဘာသာပြန်ဖို့ ကျွန်မစက်ထဲကို သိမ်းသွားတဲ့အခါ မူရင်းလင့်ခ်ကို မသိမ်းလိုက်မိတဲ့အတွက် ပြန်ရှာရ ခက်ခဲသွားလို့ မူရင်းကို မဖော်ပြနိုင်တဲ့ အတွက် တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ရှင်…
မူရင်းလေး ပြန်ရှာတွေ့ပါပြီ .. ဒီမှာပါ..http://www.4evayoung.com/touching-life-story/
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, December 19, 2009 Saturday, December 19, 2009 Labels: လူမှုရေးရာ
တစ်ခါတုန်းက ရွာတစ်ရွာမှာ မြင်း ၁၉ကောင်ကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်… တစ်နေ့ သူသေဆုံးတော့ သေတမ်းစာ တစ်စောင် ချန်ထားခဲ့တယ်.. အဲဒီသေတမ်းစာထဲမှာက ဥာဏ်စမ်း ပဟေဠိလေးနဲ့ သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ မြင်း၁၉ကောင်ကို အမွေ ခွဲဝေပေးခဲ့ပါတယ်… သူ့သေတမ်းစာထဲက အမွေ ခွဲဝေပေးခဲ့ ပုံလေးက ဒီလိုပါ…
သူပိုင်တဲ့ မြင်း ၁၉ ကောင်ထဲက တစ်ဝက်တိတိကို သူ့ရဲ့သားကို ခွဲပေးရမှာဖြစ်ပြီး လေးပုံတစ်ပုံကိုတော့ ရွာက ဘုရားကျောင်းအတွက်၊ ကျန်တဲ့ ငါးပုံတစ်ပုံကိုတော့ သူ့အပေါ်မှာ တစ်သက်လုံး သစ္စာရှိရှိနဲ့ အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်သမားတွေ အတွက် ခွဲဝေပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့..
ရွာထဲက အသက်ကြီးတဲ့ လူကြီးတွေက အဲဒီသေတမ်းစာကို ဖတ်ပြီး ဦးခေါင်းတွေ ကွဲတော့မတတ် စဉ်းစားပြီး စိတ်ရှုပ်နေကြတယ်… ဘယ်လိုများ အမွေ ခွဲပေးရ ပါ့မလဲတဲ့… မြင်းက ရှိတာက ၁၉ ကောင် .. တစ်ဝက်ခွဲရမယ် ဆိုတော့ နောက်ဆုံးမြင်းတစ်ကောင်ကို တစ်ဝက် ပိုင်းရမလိုဖြစ်နေပြီ…
( စာဖတ်သူများ … ရှေ့ဆက်မဖတ်သေးဘဲ မြင်း၁၉ကောင်ကို သေတမ်းစာထဲက ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အတိအကျ ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုများ ခွဲဝေမလဲလို့ ဒီနေရာလေးမှာ စဉ်းစားကြည့်ပါလားရှင်…)
စဉ်းစားလို့ မရဘူးဆိုရင်တော့ ရှေ့ဆက်ဖတ်ပါနော်………..
အဲဒီလိုနဲ့ သေတမ်းစာထဲက ပဟေဠိကို အဖြေမညှိနိုင်တဲ့ အတွက် ၂ပတ်တိတိကြာတဲ့တိုင်အောင် အမွေ မခွဲပေးနိုင်သေးဘဲ ဖြစ်နေပါတယ်.. နောက်ဆုံးတော့ သူတို့နေထိုင်တဲ့ ရွာနဲ့ မနီးမဝေး ရွာတစ်ရွာမှာနေတဲ့ ပညာရှိကြီးကို ဒီပဟေဠိကို ဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက် အကူအညီတောင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်..
လူလွတ်ပြီး အခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ ပညာရှိကြီးဟာ သူရဲ့ မြင်းကိုစီးပြီး ရောက်လာပါတယ်… ပြီးတော့ သူဘာများ ကူညီပေးရပါ့မလဲလို့ ရွာလူကြီးတွေကိုမေးပါတယ်… ရွာလူကြီးတွေက သေတမ်းစာ အကြောင်းကို ပြောပြပြီး အဲဒီထဲမှာ ၀ှက်ထားတဲ့ ပဟေဠိလေးကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ အကူအညီ တောင်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်..
အဲဒီ သေတမ်းစာ အကြောင်းကို သိရတာနဲ့ တစ်ပြိုင်တည်း ပညာရှိကြီးဟာ နှောင့်နှေးခြင်း တွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိဘဲ ချက်ခြင်းဘဲ ဖြေရှင်းပေး လိုက်ပါတယ်…
မြင်း ၁၉ကောင်ကို ရှေ့နောက် ၂တန်း အညီ စီခိုင်းပါတယ်.. အဲလိုစီတဲ့အခါ ရှေ့အတန်းမှာ မြင်း ၁၀ကောင်ရှိပြီး နောက်အတန်းမှာတော့ မြင်းကိုးကောင်ဘဲ ရှိပါတယ်.. နောက်ဆုံးတန်းက လွတ်နေတဲ့ တစ်နေရာမှာ သူ့ရဲ့ မြင်းကို ထည့်ပြီး စီလိုက်ပါတယ်.. အားလုံးစုစုပေါင်း အကောင်၂၀ ဖြစ်သွားပါပြီ… ဒီတော့မှ ပထမအတန်းက တစ်ဝက် ဖြစ်တဲ့ ၁၀ ကောင်ကို သေတမ်းစာထဲက အတိုင်း သားဖြစ်သူကို ခွဲပေးလိုက်ပါတယ်…. အကောင်၂၀ရဲ့ လေးပုံ တစ်ပုံဖြစ်တဲ့ ၅ကောင်ကို ရွာဘုရားကျောင်း အတွက် ခွဲဝေလိုက်ပြန်တယ်… နောက်ထပ် ငါးပုံတစ်ပုံ ဖြစ်တဲ့ မြင်း ၄ကောင်ကို သစ္စာရှိ အလုပ်သမားတွေကို ခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်.. ၁၀ကောင်ရယ် ၅ကောင်ရယ် ၄ကောင်ရယ် ပေးပြီးသွားတဲ့ နောက်ဆုံးမှာတော့ သူစီးလာတဲ့ မြင်း တစ်ကောင်သာ ကျန်နေခဲ့ပါတယ်… ဒီတော့ ပညာရှိကြီးဟာ ရွာသားတွေကို စကား အနည်းငယ် ပြောပြီးတဲ့နောက် သူ့မြင်းကို စီးပြီး ပြန်ထွက်သွားပါ တော့တယ်….
ရွာသားတွေဟာ ပညာရှိကြီးရဲ့ ဥာဏ်ပညာထက်မြက်ပုံကို အံ့အားသင့်ခြင်း မယုံနိုင်ခြင်း နှစ်ထောင်းအားရ ဖြစ်ခြင်းများစွာနဲ့ ကျန်နေခဲ့ပါတယ်.. ပညာရှိကြီး ပြောသွားခဲ့တဲ့ စကားတွေဟာလည်း သူတို့ရဲ့ရင်ထဲ အသည်းထဲမှာ ကဗျည်းထိုးလိုက်သလို ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်. အဲဒီစကားလေးကိုလဲ သူတို့ရဲ့ သားစဉ်မြေးဆက် လက်ဆင့်ကမ်းပြီး ကျင့်သုံး သွားခဲ့ကြပါတယ်…
ကျွန်တော်တို့ ဘ၀မှာ နေ့စဉ် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အဖြစ်ပျက်တွေ အကြောင်းအရာတွေ ကြားထဲမှာ တစ်ခါတစ်လေ မမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ ဖြေရှင်းလို့ မရနိုင်ဘူးလို့ ထင်ရတဲ့ ပြဿနာတွေ ကြုံတွေ့ ရတတ်ပါတယ်.. ဥပမာ အခု ဖြစ်တဲ့ မြင်း၁၉ကောင်လို ပဟေဠိ ပြဿာနာမျိုးကို ခင်ဗျားတို့ အနေနဲ့ အဖြေမရှိဘူး မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးလို့ ထင်ခဲ့ကြသလိုမျိုးပေါ့ဗျာ…. ဘယ်လောက် ခက်ခဲတဲ့ ပြဿနာမဆို အဖြေ တစ်ခုခုတော့ ထွက်ပေါက် အနေနဲ့ ရှိပါတယ်..အဲဒီလို ကြုံတွေလာတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ခေါင်းအေးအေးထား စဉ်းစားဖို့နဲ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက် ခက်ခဲတဲ့ ပြဿနာမဆို မာကြောတဲ့ ရေခဲတုံးဟာ တစ်ဖြေးဖြေး အရည်ပျော်သွားပြီး နောက်ဆုံးမှာ အငွေ့ပျံ ပျောက်ကွယ်သွား သလိုဘဲ ခင်ဗျားတို့ အခက်အခဲ၊ ပြဿာနာဟာလည်း တဖြေးဖြေးနဲ့ အဖြေကို ရှာတွေ့လာပြီး…. နောက်ဆုံး မှာတော့ အားလုံးကို ဖြေရှင်းပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်.. ကျွန်တော်တို့ ဘ၀တွေကို ဖြတ်သန်းတဲ့အခါ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ နဲ့ သစ္စာတရားဆိုတာ လက်ကိုင် ထားရပါမယ်… ချစ်ခြင်းမေတ္တာ နဲ့ သစ္စာတရားဆိုတာ ရေနဲ့တူပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့တွေက လှေနဲ့တူပါတယ်.. လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး သစ္စာ တရားတွေ ထားပြီး မေတ္တာ ပွားကြမယ် ဆိုရင် ရေပေါ်မှာ သွားတဲ့ လှေလို သက်တောင့်သက်သာနဲ့ဘ၀ပန်းတိုင်ကို ခရီးဆက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်.. တကယ်လို့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာ မပါဘူး သစ္စာမရှိဘူးဆိုရင် ရေမရှိတဲ့ ကုန်းမြေပေါ်မှာ ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ဒရွတ်ဆွဲပြီး ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲ သွားနေတဲ့ လှေနဲ့ တူပါတယ်…ဒါကြောင့် လူတိုင်းလူတိုင်း တစ်ဦးကိုတစ်ဦး စေတနာထားကြပါ.. မေတ္တာတရားလက်ကိုင်ထားကြပါ.. ဆိုတဲ့ စကားတွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်..
စာဖတ်သူတို့ ဘ၀မှာလည်း တစ်စုံတစ်ရာ အခက်အခဲ ပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ အလွယ် တကူ လက်လျှော့ အရှုံမပေးပါနဲ့ … အချိန်ယူပြီး ခေါင်းအေးအေးနဲ့ ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် ပြဿာနာရဲ့ အဖြေကို တွေ့နိုင်မှာပါ… ပြီးတော့လဲ အခက်အခဲတွေ ပြဿာနာတွေ ပြည့်နေတဲ့ လောကကြီးကို ဖြတ်သန်းတဲ့အခါ သစ္စာတရားနဲ့ မေတ္တာတရားဆိုတဲ့ ရေပေါ်မှာ ဘ၀ဆိုတဲ့လှေကလေးနဲ့ ရဲရဲရင့်ရင့် ရင်ဆိုင် ဖြတ်ကူး နိုင်ကြပါစေနော်…
http://www.funzug.com/index.php/stories/19-horses-inspirational-story.html မှ ဆီလျှော်အောင် ဘာသာပြန်ပါသည်..